Dowladda Soomaaliya oo is bedel ku sameysay Safiirada 8 dal (Akhriso magacyada) – XAMAR POST
Dowladda Soomaaliya oo is bedel ku sameysay Safiirada 8 dal (Akhriso magacyada)
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa is bedel ku sameeyay Safiirada illaa 8 dal oo bishii hore loogu yeeray inay dalka ku yimaadaan muddo 30 cisho ah, si isbedel loogu sameeyo.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah is bedelo la doonayo in lagu sameeyo Safiiro muddo xil heyntooda ay dheeraatay, waxaana wajiga hore la bedelay illaa 8 Safiir oo kala ah, Jabuuti, China, Uganda, Sudan, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi iyo Zambia.
8 Safiir ayaa lagu bedelay illaa 8 Diblomaasi oo si hayeyaal ah oo midkood uu yahay Agaasime Waaxeed ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo si KMG u heyn doona xilka Safaaradda Soomaaliya ee Lusaka Zambia.
Waxaa sidoo kale Safaaradaha China, Jabuuti, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar iyo Uganda Sii hayeyaal ka noqda Diblomaasiyiintii hayay xilalka La Taliyaha Koowaad, taas oo ka dhigan in loo eegay habka kala sareynta Diblomaasiyadda.
Wararka qaar ayaa sheegaya in is bedelka wajigiisa labaad uu saameyn doono Safiirada Soomaaliya u fadhiya Hindiya, Jarmalka, iyo Qunsuliyadda Soomaaliya ee Dubai.
DEG DEG: Galmudug & Puntland oo ku Dagaalamaya Mudug